Otú Ihe Si Kwụrụ na Siera Lion na Gini Malite n’Afọ 2002 Ruo n’Afọ 2013 (Agba nke Abụọ) | Akwụkwọ Mgbaafọ nke 2014
Inyere Ndị Ogbi Aka
Otu nchọpụta e mere gosiri na ihe dị ka puku ndị Siera Lion atọ ruo puku ise bụ ndị ogbi. Ọtụtụ narị ndị Gini bụkwa ndị ogbi. Ebe ‘ọ bụ uche Jehova ka a zọpụta ụdị mmadụ niile,’ olee otú ndị ogbi ga-esi “na-anụ” ozi ọma?—1 Tim. 2:4.
Nwanna Nwaanyị Michelle Washington, bụ́ onye ozi ala ọzọ, kọrọ otú ndị ogbi si malite ‘ịnụ’ ozi ọma. Nwanna a gụrụ akwụkwọ na Gilied. Ọ kwatara na Siera Lion n’afọ 1998. Ọ kọrọ, sị: “E zigara mụ na di m Kevin n’otu ọgbakọ e nwere ndị ogbi anọ na-abịa ọmụmụ ihe. Ebe ọ bụ na m ma Asụsụ Ndị Ogbi nke Amerịka, m malitere inyere ha aka. Alaka ụlọ ọrụ gwara m na a bịa ọmụmụ ihe nakwa mgbakọ, na m jiri asụsụ ndị ogbi na-agwa ndị ogbi ihe a na-amụ. Ha gwakwara ọgbakọ ndị nọ ọgbakọ anyị nso gbasara ndokwa a e mere maka ndị ogbi. Alaka ụlọ ọrụ hiwekwara klas a ga na-akụziri ụmụnna ndị chọrọnụ asụsụ ndị ogbi. Anyị malitere ịchọ ndị ogbi nọ n’obodo ahụ, ma na-akụziri ha Baịbụl. Ọtụtụ ndị obodo ahụ jara anyị mma n’ihi otú anyị si agbalị enyere ndị ogbi aka. Ma, o nwere ndị ihe a anyị na-eme na-ewe iwe. Otu pastọ nke na-akụziri ndị ogbi ihe gwara ha na anyị bụ ‘ndị amụma ụgha.’ Ọ gwakwara ha ka ha na-eze anyị eze. A gwara ụfọdụ n’ime ha na ọ bụrụ na anyị na ha ana-amụ Baịbụl, na a gaghị enyekwa ha ego a na-enye ha. Ihe a mere ka ndị ogbi niile nọ n’obodo ahụ kewaa abụọ ozugbo. Ndị nke anyị na ha na-amụwabeghị ihe kweere ihe pastọ ahụ kwuru. Ma ndị nke anyị na ha na-amụ ihe ekweghị ihe ahụ o kwuru. Ụfọdụ n’ime ndị nke ahụ anyị na ha na-amụ ihe mụsiwere Baịbụl ike, e mechaakwa mee ha baptizim.”
E nwere otu nwoke onye ogbi aha ya bụ Femi. Ọ bụ onye ogbi kemgbe a mụrụ ya. Ọ machaghị asụsụ ndị ogbi. Ọ naghị ekwe ka ya na onye ọ bụla na-akpa, nke ka nke, ndị na-ekwu okwu. Obi anaghị adị ya ụtọ, o chekwara na mmadụ niile kpọrọ ya asị. Ma otu ụbọchị, ya na ụmụnna ndị ma asụsụ ndị ogbi malitere ịmụ Baịbụl. Obere oge ya na ụmụnna ndị a malitere ịmụ Baịbụl, ya abịawa ọmụmụ ihe, mụwakwa asụsụ ndị ogbi n’onwe ya. Ọ naghị agha ọmụmụ ihe. E mechakwara mee ya baptizim. Ọ na-akụzikwara ndị ogbi ibe ya Baịbụl. Obi na-atọ ya ụtọ ịna-akụziri ha ihe.
Nwanna Femi nọ n’isi isi n’aka nri jiri asụsụ ndị ogbi na-abụ abụ
N’ọnwa Julaị afọ 2010, e hiwere ọgbakọ na-amụ ihe n’Asụsụ Ndị Ogbi nke Amerịka na Fritaụn. E nwekwara ndị na-amụ ihe n’asụsụ ndị ogbi n’obodo Bo nakwa na Kọnakrị, ma ha aghọbeghị ọgbakọ.
Ha Dara Ogbenye, Ma Ha “Bara Ọgaranya n’Okwukwe”
Baịbụl gwara anyị na ọtụtụ ndị na-eso ụzọ Jizọs n’oge ochie dara ogbenye. Jems, onye na-eso ụzọ Jizọs, dere, sị: “Ọ̀ bụ na Chineke ahọrọghị ndị dara ogbenye n’ihe nke ụwa ka ha bụrụ ndị bara ọgaranya n’okwukwe?” (Jems 2:5) Okwukwe ụmụnna ndị nọ na Siera Lion na Gini nwere na Jehova na-akasi ha obi, na-emekwa ka ha nwee olileanya.
Ọtụtụ ụmụnna ndị bi n’ime ime obodo ndị dị na Siera Lion na Gini dara ogbenye. Ma, okwukwe ha nwere na Jehova na-eme ka ha na-edokọta ego ruo ọtụtụ ọnwa ka ha nwee ike ịga mgbakọ distrikti. Ụfọdụ na-ere ihe ha wetara n’ubi. Ihe dị ka iri mmadụ abụọ ma ọ bụ iri mmadụ atọ na-anọju na gwongworo na-aga mgbakọ. Ha na-agba ụzọ ọjọọ bụ́ uzuzu uzuzu, anwụ ana-ekekwa ha n’isi ruo iri awa abụọ ma ọ bụ karịa. E nwekwara ụmụnna ndị ọzọ na-eji ụkwụ aga ogologo ije tupu ha erute. Otu nwanna nwoke kwuru, sị: “Anyị na-eji ụkwụ gaa kilomita iri asatọ tupu anyị eruo ebe a ga-enwe mgbakọ. Anyị na-ebuju unere ebuju na-aga. Anyị na-ere unere ndị ahụ n’ụzọ ka ibu nwee ike ịdịrị anyị mfe, nakwa ka anyị nwee ike nweta ego ụgbọ.”
Ụmụnna a ji gwongworo a na-aga mgbakọ distrikti
Okwukwe ọtụtụ ụmụnna nwere na Jehova emeela ka ha ghara ikwo na ha dara ogbenye gawa ala Bekee ka ha kpata ego. O nwere ihe otu nwanna aha ya bụ Emmanuel Patton kwuru gbasara ụmụnna ndị a. Nwanna a agaala Ụlọ Akwụkwọ Ọmụmụ Baịbụl Maka Ụmụnna Na-alụbeghị Nwaanyị. Ọ sịrị: “Anyị tụkwasịrị Jehova obi na ọ ga-egboro anyị mkpa anyị. Anyị ghọtara na ozi anyị dị ndị obodo anyị oké mkpa n’ihi na e nwechaghị ndị na-ezi ha ozi ọma.” (Mat. 6:33) Nwanna Emmanuel bụ okenye ugbu a n’ọgbakọ. Ya na Eunice nwunye ya na-ejechikwa ozi ọma anya. E nwere ụmụnna ndị ọzọ na-achọghị ịga ala Bekee n’ihi na ha chọrọ ka ezinụlọ ha dịrị n’otu, nakwa ka ha bụrụ a kwaa akwụrụ n’ọgbakọ. Nwanna Timothy Nyuma bụ otu n’ime ha. Ọ bụ onye ọsụ ụzọ pụrụ iche, ọ na-enyekwara onye nlekọta sekit aka eleta ọgbakọ. O kwuru, sị: “Ekweghị m arụ ọrụ gaara eme ka m biri iche, ezinụlọ m ebiri iche. Mụ na Florence nwunye m na-eji aka anyị akụziri ụmụ anyị ihe. Anyị ekweghị akpọnye ha ndị ọzọ ka ha zụọrọ anyị.”
E nwekwara ihe ụmụnna ndị ọzọ na-eme iji gosi na ha nwere okwukwe na Jehova. Ha ji ozi Jehova kpọrọ ihe n’agbanyeghị nsogbu ndị ha na-enwe. Nwanna Kevin Washington, kwuru, sị: “Ọtụtụ ụmụnna anyị na-ejechi ozi ọma anya, na-arụkwa ọrụ ha n’ọgbakọ nke ọma n’agbanyeghị nsogbu ndị nwere ike ime ka ha nọrọ n’ụlọ na-eche ụwa ha. Dị ka ihe atụ, ọrịa anaghị ekwe ahapụ ụfọdụ n’ime ha aka. E nweghị ụlọ ọgwụ ga-agwọli ha n’obodo ha. Ha enweghịkwa ego ha ga-eji gaa obodo ọzọ ebe e nwere ụlọ ọgwụ ga-agwọ ha. Ndị ọzọ na-agbasi mbọ ike ka ha mụta otú e si agụ na otú e si ede. Ọ bụrụ na otú otu nwanna si mee ihe omume ya amasịghị m, m na-ajụ onwe m, sị: ‘Ọ bụrụ na m na-arụ ọrụ ego ka nwanna a, na-arịa ọrịa otú o si arịa, nwee nsogbu anya otú o nwere, nwee akwụkwọ ole na ole e ji eme nchọnchọ, ma ghara inwe ọkụ eletrik otú ọ na-enweghị, m̀ gaara ekwu okwu ahụ nke ọma karịa nwanna a?’”
Ihe a niile ụmụnna anyị ndị Siera Lion na ndị Gini na-eme na-enye Jehova otuto. Ụmụnna ndị a na-eme ka ndị mbụ soro ụzọ Jizọs. Ha na-eme ka ndị mmadụ mata na ha bụ ndị ozi Chineke, ‘site n’ịtachi obi n’ọtụtụ ihe, ya bụ, site n’ịtachi obi ná mkpagbu, ịtachi obi ná mkpa, dị ka ndị dara ogbenye ma bụrụ ndị na-eme ka ọtụtụ ndị baa ọgaranya, dị ka ndị na-enweghị ihe ọ bụla ma ha nwere ihe niile.’—2 Kọr. 6:4, 10.
Obi Siri Ha Ike na Ihe Ga-adị Mma n’Ọdịnihu
N’ihe karịrị iri afọ itoolu gara aga, Nwanna Alfred Joseph na Leonard Blackman kwuru na ubi Siera Lion “achaala maka owuwe ihe ubi.” (Jọn 4:35) Mgbe ụmụnna ndị a kwuchara ihe a, iri afọ atọ na ise agaakwa, Nwanna Manuel Diogo si Gini degara alaka ụlọ ọrụ dị na Frans akwụkwọ ozi. Ọ gwara ha na ọtụtụ ndị Gini chọrọ ịmụ Baịbụl. Obi siri Ndịàmà Jehova nọ na Siera Lion na Gini taa ike na ọtụtụ ndị obodo ha ka ga-abata n’ọgbakọ.
N’afọ 2012, ndị bịara Ncheta Ọnwụ Jizọs na Gini dị puku mmadụ atọ, narị anọ na iri asaa na itoolu. Ha ji okpukpu anọ na ọkara karịa ndị nkwusa ole e nwere na Gini. Ndị nkwusa e nwere na Siera Lion dị puku mmadụ abụọ na mmadụ iri atọ. Ma, ndị bịara Ncheta Ọnwụ Jizọs n’afọ ahụ dị puku mmadụ asaa, narị mmadụ asatọ, na iri ise na anọ. Ha ji okpukpu anọ karịa ndị nkwusa ole e nwere na Siera Lion. E nwere otu nwanna nwaanyị dị afọ iri itoolu na atọ bịara Ncheta Ọnwụ Jizọs n’afọ ahụ. Aha ya bụ Winifred Remmie. Ọ bụ onye ọsụ ụzọ pụrụ iche. Ya na di ya bụ́ Lichfield bịara Siera Lion n’afọ 1963. Nwanna nwaanyị a ejeela ozi oge niile ruo afọ iri isii. Ọ ka bụkwa ọsụ ụzọ pụrụ iche. Nwanna nwaanyị Winifred kwuru, sị: “Olee onye nwere ike ikweta n’ụwa a na a ga-emecha nwee ọtụtụ Ndịàmà Jehova n’obodo a bụ́ Siera Lion? Ọ bụ eziokwu na akaala m nká, ikwusa ozi ọma ka na-atọ m ụtọ.” *
Otú obi dị Nwanna Nwaanyị Winifred ka ọ dịkwa ụmụnna niile nọ na Siera Lion nakwa na Gini. Ha dị ka osisi a kụrụ n’akụkụ iyi, nke na-amị mkpụrụ ya n’oge ya, n’ihi na ha kpebisiri ike ịna-akụziri ndị mmadụ ihe, ka ha nwee ike ịna-enye Jehova otuto. (Ọma 1:3) Jehova ga na-enye ha ike ha ga-eji na-akọrọ ndị mmadụ banyere otú ha ga-esi nwere onwe ha n’eziokwu. Nnwere onwe a bụ “nnwere onwe dị ebube nke ụmụ Chineke.”—Rom 8:21.
Ndị a bụ ndị so na Kọmitii Alaka. E si n’aka ekpe gụrụ gawa aka nri, onye nke mbụ bụ Collin Attick, onye nke abụọ bụ Alfred Gunn, onye nke atọ bụ Tamba Josiah, onye nke anọ abụrụ Delroy Williamson
^ para. 16 Nwanna Nwaanyị Winifred Remmie nwụrụ n’oge a nọ na-ede akụkọ a.
Otú Ihe Si Kwụrụ na Siera Lion na Gini Malite n’Afọ 2002 Ruo n’Afọ 2013 (Agba nke Abụọ)